भन्सार जाँचबिनै सामान पास ! « News24 : Premium News Channel
भन्सार जाँचबिनै सामान पास !
नेपालगन्ज : भन्सार चेकपोस्टमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको लापरबाहीले कैयौँ सामान बिनाभन्सार छुट्ने गरेका छन् । भन्सार कार्यालयअगाडि ब्यारिएल लगाएर बसेका सुरक्षाकर्मीले कागजपत्र जाँचमा ध्यान नदिँदा भारतबाट सामान लिएर आएका कैयौँ गाडी भन्सार जाँच नगरी छुट्ने गरेका छन् ।
अन्यत्र ठाउँमा जाँचका क्रममा भन्सार गरिएको कागज नदेखिए केही सामान बरामद गरिन्छ तर धेरैजसोले बिनाभन्सारै सामान ओसारपसार गरिरहेका हुन्छन् । भन्सारको ब्यारिएल पार गरिसकेका एकाध गाडी र सामान मात्रै प्रहरीले पक्राउ गरेर राजस्व अनुसन्धान कार्यालयलाई बुझाउने गरेका छन् । शनिबार साँझ मात्रै भन्सार कार्यालय नेपालगन्जमा एउटा त्यस्तै घटना भयो । भारतबाट विभिन्न विद्युतीय मेसिन लिएर आएको एउटा कन्टेनरले भन्सारको ब्यारिएल पार गर्‍यो । त्यहाँ सुरक्षकर्मीले त्यो गाडीलाई रोकेनन् ।
पहिलोपल्ट भारतबाट सामान लिएर नेपाल छिरेको त्यो कन्टेनरका ड्राइभरले भन्सार कार्यालयदेखि केही मिटर मात्रै अगाडि आएर एउटा पान पसलमा ‘भन्सार कार्यालय कहाँ पर्छ ? ‘भनेर सोध्दै थिए । त्यहाँ रहेका सादा पोसाकका प्रहरीले थप केरकार गरे अनि त्यो कन्टेनर, चालक र सहयोगीलाई नियन्त्रणमा लिए । संघीय प्रहरी इकाइ नेपालगन्जले ‘भन्सार नगरी भित्रिएको’भन्ने मुचुल्का उठाएर ती सामान, गाडी अनि त्यसका कर्मचारीलाई समेत राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगायो ।
‘भन्सार पार गरिसकेको एउटा कन्टेनरलाई जाँच गर्दा हामीले बिनाभन्सार भित्रिएका सामान भेटायौँ’, संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक मोहम्मद इसरायल अन्सारीले भने, ‘नौ प्रकारका विभिन्न विद्युतीय मेसिन, गाडी अनि गाडीका स्टाफलाई हामीले नियन्त्रणमा लिएर राजस्व अनुसन्धानको जिम्मा लगाएका छौँ ।’
अन्यत्र ठाउँमा जाँचका क्रममा भन्सार गरिएको कागज नदेखिए केही सामान बरामद गरिन्छ तर धेरैजसोले बिनाभन्सारै सामान ओसारपसार गरिरहेका हुन्छन् ।
भारतको रुपैडिहाबाट नेपाल प्रवेश गर्दा सीमा गेटबाटै सुरु हुने जाँचका लागि करिब दुई किलोमिटरकै दूरीमा पाँचवटा चेकपोस्ट छन् । सामान्य साइकल यात्रीका झोला र सामानसमेत सबै ठाउँमा जाँच हुने ती चेकपोस्टबाट ठूलो ट्रक कसरी बिनाजाँच पार भयो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ भन्सार प्रमुख स्वयंसँग पनि छैन । उनले ‘हामी अनुसन्धान गर्छौं’मात्रै भनेका छन् ।
तर कैयौँपटक यसरी बिनाभन्सार सामानले भरिएका ठूलाठूला गाडीसमेत छुट्ने गरेका छन् । कतिले धेरै मूल्यका सामान राखेर थोरै मूल्य र भन्सार पर्ने खालका सामानका बिल देखाएका हुन्छन् । कतिपय गाडी यस्ता पनि फेला परेका छन् कि, जसले बाहिर एउटा सामान राखेका हुन्छन् अनि त्यसैको बिल बनाएर भित्र अरू नै धेरै मूल्य पर्ने सामान राखेका हुन्छन् । ती सबै गाडी खोलेर जाँच गर्न भन्सार कार्यालयसँग न त पर्याप्त कर्मचारी छन्, न त समय नै ।
दैनिक सयौँ गाडी भित्रिने नेपालगन्ज भन्सार मध्य तथा पश्चिम नेपालकै प्रमुख भन्सार हो जहाँ दैनिक सामान आयात गरिएबापत करोडौँ रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामै यो भन्सार कार्यालयले एक अर्ब ९३ करोड १० लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । शनिबारको यो घटनालाई छानबिन गर्न नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयले एउटा छानबिन समितिसमेत बनाएको छ ।
भन्सार अधिकृत सुभाषप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तथ्यांक अधिकृत अनिल साउद र नासु कमलसिंह खड्का सदस्य रहेको छानबिन समितिले घटनाबारे छानबिन गरेर एक हप्ताभित्र रिपोर्ट तयार गर्नेछ । अक्सर शनिबार भन्सार कार्यालयले आधा दिन मात्रै भन्सार गर्छ । त्यसमाथि शनिबारको दिन कार्यालयका कम्प्युटरमा सर्भरसमेत चलेको थिएन । त्यसैले यो दिन भन्सारको काम अझ थोरै समय मात्रै भयो । तर साँझको समयमा भारतबाट आएको एउटा कन्टेनरले प्रहरीसमेत तैनाथ गरिएको भन्सारको ब्यारिएल सजिलैसँग पार गर्‍यो।
कन्टेनरमा रहेको सामान नेपालगन्जस्थित दुर्गेश्वरी इलेक्ट्रिकल्स एन्ड जनरल अर्डर सप्लायर्सको हो । कन्टेनरभरि रहेका विभिन्न विद्युतीय सामानको एउटा बिल चार लाख ३० हजार र अर्काे ९७ हजार भारुको छ । सप्लायर्सका सञ्चालक पप्पु साउदका अनुसार उनले भन्सार गराउने जिम्मेवारी आफ्ना एकजना एजेन्टलाई दिएका थिए । तर ती एजेन्टले पनि आफूलाई गाडी समातिएपछि मात्रै थाहा भएको बताए ।
‘शनिबार आधा दिन मात्रै भन्सार हुन्छ तर म गाडी पर्खिएर साँझ ५ बजेसम्म अफिसमै बसेको थिएँ । गाडी त भन्सार पार गरेर पनि समातिसकेछ’, एजेन्ट जगदीश बनियाँले भने, ‘यति धेरै पुलिस छन्, चेकपोस्ट छ त्यति ठूलो गाडी पास हुँदासम्म के हेरेर बसेका थिए ? अनि अलि पर फेरि प्रहरीले नै समाउँछ, हामी त भन्सार तिर्न भनेरै बसेका थियौँ, यो भन्सार सुरक्षाकर्मीकै लापरबाही हो ।’
नेपालगन्ज भन्सार प्रमुख जनार्दन आचार्यका अनुसार ससानो लापरबाहीले भन्सारमा यस्ता घटना हुने गरेका छन् । तर, घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न भन्दै कार्यालयले छानबिन टोली बनाएको उनले बताए । ‘दोषीलाई कारबाही हुन्छ नै, यस्तो लापरबाही सह्य हुँदैन, निर्दाेष छुट्छ, छानबिनपछि दोषी देखिएकालाई कारबाही हुन्छ’, उनले भने, ‘राजस्व अनुसन्धान कार्यालयले पनि अनुसन्धान गरिरहेकै छ, हाम्रो छानबिन टोली पनि बनेको छ, अबका दिनमा यस्ता लापरबाही हामीले सच्याउँछौँ ।’राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुरका प्रमुख कर्ण तिमिल्सिनाले ती सामानबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । अन्नपूर्णपोष्ट बाट
बेरुजुका विषयमा सरकारले अपनाएका विधि र पद्धतिमा अध्ययन गर्न आवश्यक : अर्थमन्त्री शर्मा
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बेरुजुका विषयमा सरकारले अपनाएका विधि र पद्धतिमा अध्ययन गर्न आवश्यक